Sishone 'sijabule' isilomo se-Trompies - Ilanga News
Home Izindaba Sishone ‘sijabule’ isilomo se-Trompies
Sishone ‘sijabule’ isilomo se-Trompies
Ngamalungu eqembu iTrompies esaphelele. Ngakwesokudla uMjokes Matsane oshone engozini yemoto ephuma ukuyonandisa.
UHAMBE emhlabeni ejabule u-Emmanuel Mojalefa Matsane owaziwa ngoMjokes, oyilungu le-Trompies aphinde abe ngomunye wabaqondisi benkampani iKalawa Jazmee.
UMjokes ushone engozini yemoto ebuya ukuyonandisa emcimbini obekuqashwe kuwona iTrompies. UMjokes ubhale ekhasini lakhe li-ka-Instagram ukuthi ujabule njengoba bebeqashwe okokuqala se-lokhu izwe layiswa kuthaqa nge-nxa yokubheduka kweCorona nya-kenye.
“Sagcina ukusebenza eLesotho ngo-2019, Nkosi busisa i-Afrika.” Lawa ngamazwi akhe okugcina kwi-Instagram.
UMkhonzeni “Professor” Langa ongomunye waba-culi baseKalawa, utshele ILANGA ukuthi uMjokes uhambe emhlabeni ethokozile.
“Ubengifonelile nje izolo (ngoMgqibelo) engitshela indlela ajabule ngayo njengoba ebeyosebenza okokuqala ngemuva kweminyaka emibili. Nami bekumele ngihambe naye kodwa ngavinjwa yizinto zasekha-ya,” esho.
Ukudlula emhlabeni kukaMjokes, kuqinisekiswe nguOscar Bonginkosi “Oskido” Mdlongwa, okhiphe isitatimende ethi uMjokes ulimale engozini yemoto entathakusa yayizolo. Nokho kulesi sitatimende akandanga kakhulu ngoba lesi sehlakalo besisanda kwenzeka. Uthe imininingwane eminingi izophuma ekuqhubekeni kwesonto.
Kuthiwa ulimale ehamba yedwa uMjokes, ubengahambi namanye amalungu eTrompies njengoba bonke benezimoto zabo. UMjokes ushiye emhlabeni amadodana amathathu kuwona okukhona neqanjwe ngoJazmee osuselwa kwiKalawa Jaz-mee, nenkosikazi yakhe yesibili njengoba eyokuqala bahlukanisa nayo.
Isililo siqhume nasezinkundleni zokuxhumana, osaziwayo nabalandeli bakhe bedlulisa imiyalezo ye-nduduzo. Unconywe nje-ngeqhawe elalwela inkululeko yamaciko.
Imininingwane mayelana nokufihlwa kwakhe izolandela, silobe ingakakhishwa. Wonke amalungu eTrompies abengatholakali ezingci-ngweni.
Previous articleUsizi lomndeni wabawu-37 ompintshana emxhasweni
Next article‘Ubanjiswe udonga’ eshonelwe nguyise